Jurgen Klinsmann Oo Magacaabay Lixda Ciyaartoy Ee Ingiriiska Ah Ee Xiddigaha Jarmalku Ka Baqayaan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJurgen Klinsmann Oo Magacaabay Lixda Ciyaartoy Ee Ingiriiska Ah Ee Xiddigaha Jarmalku Ka Baqayaan
Jurgen Klinsmann Oo Magacaabay Lixda Ciyaartoy Ee Ingiriiska Ah Ee Xiddigaha Jarmalku Ka Baqayaan
June 28, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Kulamada Caalamiga Ah 2
Halyeyga reer Germany ee Jurgen Klinsmann ayaa shaaciyey magacyada lix ciyaartoy oo ka tirsan xulka qaranka England oo cabsi ku abuuraya xiddigaha xulka Germany oo ay Salaasada habeen dambe ku kulmi doonaan wareegga 16ka tartanka Euro.
England iyo Germany ayaa ku wada ciyaari doona garoonka Wembley ee magaalada London, waana kulan aad loo sugayo oo ay ku lammaan yihiin xasuuso waaweyn iyo murugooyin ay Ingiriisku illoobi la’ yihiin.
Warbaahinta iyo falanqeeyeyaasha kubadda cagta ayaa England u saadaalinaya inay badin doonto ciyaartan, iyadoo ka aargoosanaysa Germany oo sannadkii 1990kii ka reebtay Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Talyaaniga iyo Euro 96.
Jurgen Klinsmann oo weerarka uga ciyaari jiray Jarmalka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in Ingiriisku haystaan ciyaartooyo badan oo heersare ah, laakiin uu qiimayn doono marka ay ka hor tagaan waddankii Jarmalka.
Lix ciyaartoy ayuu si gaar ah usoo xushay Jurgen Klinsmann, waxaana ugu horreeya Phil Foden oo uu ku tilmaamay laacibka uu la dhacsan yahay ciyaartiisa iyo Harry Maguire oo uu barbar-dhigay halyey reer Brazil ah.
Klinsmann oo u warramayay Alan Shearer oo la shaqeeya wargeyska The Athletic ayaa yidhi: “Waxa aad haysataan Raheem Sterling, waxa aad haysataan Mason Mount. Waxa aad hadda hesheen Saka oo si fiican u ciyaaray kulankii Czech. Waxa aad haysataan Phil Foden oo runtii aan jecelahay, sannad cajiib ahna kusoo qaatay Man City.
“Waxa aad haysataan Harry Maguire oo si walba u cabsi geliya qof walba marka uu wiilkani dhex wareego khadka dhexe. Aniga waxa uu isoo xasuusiyaa Lucio, difaacii dhexe ee Brazil – wuxuu u muuqdaa baabuurka Mustang isagoo eryanaya qof walba.
“Ugu dambayntiina waxa aad haysataan No.9 dilaa ah [Harry Kane] oo aan wali bilaabanin [qaab fiican ku bilaabanin] tartanka.”
Jurgen Klinsmann waxa kale oo uu sheegay in ciyaaryahannadani ay cabsi ku hayaan xiddigaha Jarmalka, laakiin haddana aanu isagu shaqsiyan walaac ka qabin oo dalkiisu iska caabbin karayo.
Horta koopkii aduunka ee 1990 maxad meesha ka keentan kii ka danbeyeey ee 2014 kii ba sooka germany ka reeba england koopka aduunka mise taariikhda ma hysaan ba.
Maxa euro 96 kaliya ah 2010 sow ma ahayn markii south africa lagu qabtay 4 uu kaga badin jiray jarmalku.
Mida kale laacib cayaaro xiiso badan ayaa caawa jira ka warama kuwaas reero war badan ayad nagu wareeriseen. Croatia oo finalkii 2018 joogtay ayaa la dheelaysa spain oo kamid ah labada kooxood ee ugu koobabka badan euro. Cayaarta kalena World champion ayaa cayaaraya. England England ayad dadka ladaba taagan tihiin. Allaha ina gaadhsiiyo waa habeen dambe.